**IYOKUGQIBELA** AMAGUMBI AMA-3 okulala eMntla LONDON (UWO)
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKristopher
Igumbi lokulala eliNtofontofo eli-3 kwiKhaya laseLondon! Ihlaziywe ngokupheleleyo kwaye ikwindawo ephambili-imizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya kwiYunivesithi yaseNtshona kwaye ngaphantsi kwemizuzu eli-10 ukuya kudederhu lweevenkile, isibhedlele seDyunivesithi, iivenkile ezithengisa ukutya, ezothutho, iindawo zokutyela nokunye! Eli khaya liphangaleleyo likwindawo ezolileyo nenobuhlobo enendawo yokuhlala enkulu, ikhitshi kunye newasher & dryer. Eli khaya lilungele ukusebenza, ukudlala, okanye iholide kwaye liya kukwenza uzive usekhaya! Indawo yokupaka e-1 kunye ne-Wi-Fi efakiweyo.I-Oversstay/Late intlawulo iyasebenza.
Indlu yi-duplex. Le yiyunithi ephezulu enokufikelela kucango lwangaphambili. Indawo ohlala kuyo yohluke ngokupheleleyo, akukho ukufikelela phakathi kweeyunithi. Akufuneki ukuba sifikelele kwindawo yakho yokuhlala ngelixa ulapha.
I-driveway yabelwana kunye nenye iyunithi eyahlukileyo. Indawo enye yokupaka ekhoyo kwi-driveway kodwa indawo yokupaka yasimahla yesitrato yasimahla ifumaneka kuphela ukusuka nge-30 ka-Epreli ukuya kwi-1 kaNovemba.
Ikhaya licoceke kakhulu kwaye licocekile ngokwemigangatho emva kweendwendwe zonke.
Ikhitshi lixhotyiswe zizinto zonke zombane, i-cutlery, iimbiza, iipani, izitya, iiglasi, iketile, umenzi wekofu nokunye okuninzi!
Umbuki zindwendwe ngu- Kristopher
Sisoloko sifumaneka kwizicelo okanye uncedo. Ngena ngokungena keyless. Siza kukuthumelela ikhowudi ngosuku lokungena! Qhagamshelana nathi ngefowuni okanye nge-imeyile.